फ्रेन्चाईजले महिला क्रिकेटलाई चर्चामा ल्याउनेछ : जयराज राय (अन्तर्वार्ता) - Khelpati
फ्रेन्चाईजले महिला क्रिकेटलाई चर्चामा ल्याउनेछ : जयराज राय (अन्तर्वार्ता)
बिहिवार, फाल्गुन १६, २०७५ खेलपाटी संवाददाता
काठमाडौं । जयराज राय, नेपाली क्रिकेटले चिन्ने नाम होईन । नेपाली क्रिकेटले उनलाई चिन्नुपर्ने कारण पनि त छैन । तर पछिल्लो समय घरेलु क्रिकेटमा महिला फ्रेन्चाईज लिग चर्चामा छ । त्यसको नाम जुराईएको छ, एनसीएल महिला टी–ट्वान्टी फ्रेन्चाईज लिग ।
यही महिला लिग गर्नुपर्छ भनेर कस्सिएर लागेका एक युवा हुन्, जयराज राय ।
घरेलु क्रिकेटमा पछिल्लो समय फ्रेन्चाईजको बाढी नै छ । तर दुर्भाग्य सबै प्रतियोगिता पुरुष क्रिकेटमा केन्द्रित छ । घरेलु प्रतियोगिता शुन्य जस्तै अवस्थामा रहदाँ महिला क्रिकेटरले खेल्न पाएका छैनन । खेलाडी उत्पादनको प्रक्रिया लगभग शुन्य जस्तै अवस्थामा छ ।
पुरुष क्रिकेटर अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता सहित फ्रेन्चाईज लिगमा व्यस्त रहदाँ राष्ट्रिय टिमका खेलाडी बाहेक महिला क्रिकेटरले ब्याट समाउन नपाएको धेरै भईसक्यो । पुरुषका फ्रेन्चाईजले प्राप्त गरेको सफलताले पछिल्लो समय धेरैको ध्यान महिला फ्रेन्चाईजतर्फ सर्न थालेको छ ।
यही अवस्थामा एनसीएलले महिला फ्रेन्चाईजको सुरुवात गर्दैछ । एसियामै पहिलो महिला फ्रेन्चाईज लिगको दाबी गरिएको प्रतियोगिता आयोजनाको उद्वेश्य, चुनौती र सम्भावनाका बिषयमा एनसीएलका प्रबन्ध निर्देशक जयराज रायसंग खेलपाटीकर्मी विश्वास थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
क्रिकेटमा आउनुको कारण के हो ?
म खेल प्रेमी हुँ । क्रिकेट, फुटबल दुवैमा लगाव छ । म आफै क्रिकेट खेल्थे, कलेज हुदाँ क्याप्टेन थिए । खेललाई माया गर्ने भएर क्रिकेटमा केही गर्न पर्छ भनेर आएका हौं ।
सबै पुरुषको फ्रेन्चाईज लिग गर्न लालायित छन् । तर तपाईले महिला क्रिकेट रोज्नुको कारण ?
सबैले पुरुष क्रिकेटलाई प्राथामिकता दिनु भएको छ । महिला क्रिकेटमा कोही छैन । त्यसपछि हामीले क्रिकेटका विभिन्न निकायसंग भेट गर्यौ । उहाँहरुले हौसला दिनुभयो । सहयोग गर्नुभयो । महिला क्रिकेटमा केही गरौ भनेर आएका हौ । हामीसंगै अरुले समेत महिला क्रिकेटको बिषयमा केही सोचेको हुनुपर्छ ।
प्रतियोगिता आयोजनाको तयारीमा हुनुहुन्छ । कत्तिको गाह्रो छ महिला क्रिकेटमा काम गर्न ?
छैन । त्यो महशुश गरेका छैनौ । सबैले सहयोग गर्नुभएको छ । जसलाई भेटेका छौ । सबैले अगाडी बढ्नपर्छ भन्नु भएको छ । सबैको हौसला र प्रेरणा छ ।
क्यान निलम्बनमा हुदाँ फ्रेन्चाइज लिगले पुरुष क्रिकेट धानेको छ । तर महिला क्रिकेटमा कसैको ध्यान गएन ?
म अरुको कुरा गर्न सक्दिन तर हामी पनि ढिला भयौं । दुई बर्ष अघि योजना आएको भए महिला क्रिकेटमा धेरै आयाम थपिने थियो ।
महिला क्रिकेटले आजसम्म ठुला सफलता हाँसिल गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो लिग कसरि सफल होला ?
हामी बिश्वस्त छौं, लिग सफल हुन्छ । फ्रेन्चाईज लिगले महिला क्रिकेटरलाई एक्सपोजर दिन्छ । केही मात्रामा भएपनि आय आर्जनको बाटोमा अघि बढाउछ । खेलाडीले जति खेल्न पाउछ, खेलमा उत्तिकै सुधार आउछ । केही महिलाको फ्रेन्चाईज लिग थपिने हो भने विश्व क्रिकेटमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।
तपाई एसियाकै पहिलो महिला फ्रेन्चाइज लिग भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ । महिला क्रिकेटमा के प्रभाव पार्ला ?
क्रिकेटका सरोकारवाला पक्षसंग भेटघाट गर्दा उहाँहरु निकै खुसी हुनुहुन्छ । खेलाडी खुसी भएपछि अरु के चाहियो र ?
नेपालमा महिला क्रिकेटको गतिविधि करिब करिब शुन्य अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा फ्रेन्चाईज लिग सुरु गर्न कत्तिको चुनौती छ ?
सुरुमा चुनौतीपुर्ण देखिएको थियो । सबैसंग छलफल गर्दै जादाँ कोही कसैले यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने देखियो । यसमा चुनौती छन् । सबै सहयोगीले हरेक कदममा साथ दिनुभएको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा तपाईको पृष्ठभुमी खेल क्षेत्रसंग जोडिएको छैन । फ्रेन्चाईज लिग सुरु गरेर सुन्यतामा ढुङ्गा हान्नु भएको त होईन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यसमा ठुलो टिमको हात छ । धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । जसले खेल क्षेत्रमा १०/१५ बर्ष बिताउनुभएको छ । टिम बलियो छ । त्यसैले मलाई सजिलो भएको हो ।
फ्रेन्चाईज लिगमा विदेशी खेलाडीको सहभागिता रहन्छ त ?
हुदैन । हामीले प्रयास गर्न खोजेका थियौ । यसको प्रक्रिया लामो रहेछ । हामी प्रतियोगिाको निकै नजिक छौ । हामीले यसपटक नभ्याउने भयौ । अर्को संस्करणबाट हुन सक्छ ।
लिगमा चार टिममात्र छन् । कारण ?
नेपालमा महिला खेलाडी कम छन् । बिदेशी खेलाडी पनि ल्याउन सकेको भए पाँच टिम हुन सक्थ्यो । जति खेल हुन्छ, खेल्ने वातावरण तयार हुने हो । खेलाडी जन्मिने हुन् ।
खेलाडीको संख्याले टिमको निर्धारण गरेको हो ?
खेलाडीको गणना गरेर नै हामीले टिम निर्धारण गरेका हौँ । बिराटनगर, धनगडी, कन्चनपुर लगायतका जिल्लामा सहकार्य गरेर खेलाडी अनुसार टिम बनेको हो ।
पछिल्लो समय सबैको ध्यान प्रतियोगिता आयोजनामा केन्द्रित छ, तल्लो तहबाट खेलाडी उत्पादनमा कसैको ध्यान छैन । फ्रेन्चाईज लिग खेलाएर मात्र नेपाली क्रिकेट अघि बढ्न सक्छ ?
महिला क्रिकेट निकै कमजोर अवस्थामा छ । यसमा आउने मुनाफाको बिषय सबैले बुझ्न सक्छन् । अर्को कुरा फ्रेन्चाईजले पुरुष क्रिकेटलाई चर्चामा ल्याएको हो । अब त्यसरीनै महिला क्रिकेटलाई समेत अघि बढाउने हो । सबैले महिला क्रिकेटको बिषयमा अब थाहा पाउन आवश्यक छ । महिला क्रिकेटको प्रतिभालाई चिन्न आवश्यक छ । फ्रेन्चाईजले महिला क्रिकेटलाई समेत चार्चामा ल्याउछ । सबैको सहयोग आउँछ । यसले खेलाडी, अभिभावकलाई समेत प्रेरित गर्छ ।
खेलाडी छनोट अक्सनबाट हुने भनिएको छ, राष्ट्रिय खेलाडी देश बाहिर छन् । लिग सुरु हुन केही दिनमात्र बाँकी छ । खेलाडीलाई क्लोज क्याम्पमा राख्न पर्दैन ?
राखिन्छ । खेलाडीलाई हप्ता दिन क्याम्पमा बस्ने समय पुग्छ । हामीले टेक्निकल टिमसंग कुराकानी गरिसकेका छौ ।
लिगका कारण मोफसल रोज्नुको कारण ?
हामी त्रिवी मैदानमा गएका थियौ । तर सबै तालिका निकै व्यस्त रैछ । सोही कारण काठमाडौं बाहिर जान पर्यो । गृह जिल्ला भएका कारणले समेत विराटनगरमा आयोजना गरिने निश्चित भयो ।
काठमाण्डौ बाहिर अनि महिला क्रिकेट, दर्शकको उपस्थिती होला ?
हामीलाई सबैले सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने बिश्वास छ । दर्शकको बिषयमा हामीले पनि सक्दो प्रयास गर्नेछौ । सहभागिता बढाउन योजना बनाएका छौ ।
एनसीएल वुमन्स टी–२० लिग घोषणा हुनु भन्दा पहिले उमेर समूह, पुरुष र महिलाको ठुलो लिग भनेर चर्चा गरिएको थियो । तयारीको कस्तो छ ?
उमेर समूहको हामीले तयारी गरेका छौं । विस्तारै सबै बिषयमा खुलाउँदै आउनेछौ ।
भिडियो हेर्नुहोस् -
आठौंको मिति नतोके स्वार्थ लुकेको सन्देश बाहिर जान्छ : दलजित श्रीपाली (अन्तरवार्ता)
एएफसी कपमा समुह चरण पार गर्ने लक्ष्य हो : छिरिङ गुरुङ (अन्तरवार्ता)
एनआरएनएका खेलाडीले पदक जित्नेछन् : मुकेश बरुवाल (अन्तरवार्ता)
सागको अर्थपुर्ण आयोजना आवश्यक छ : जिवनराम श्रेष्ठ (अन्तरवार्ता )
क्षमता र खेल्ने शैली हेरेर योजना बन्नेछ : योहान कालिन (अन्तरवार्ता)
“फाइनलका लागि तयार छाै‌‌‍‍‍‍‍”
नाडाललाई इटालियन ओपनको उपाधि
मेस्सीले जिते छैटौं पटक पिचिची अवार्ड
अन्तिम खेलमा च्याम्पियन बार्सिलोनाको बराबरी
स्टर्लिङ ईङ्ल्याण्डको नयाँ कप्तान !
गोल्डेनगेटको पाँचौ जित
मनिष डाँगी फुटबल खेलाडी Weight 55 kg Height 5.8 ft Birthday7Feb
वरिष्ठ संवाददाता दिपेश तिमलसिना
प्रदेश संवाददाता सुनिल गाउँले (प्रदेश-२)
संवाददाता रमेश सुवेदी रोशन केसी विश्वास थापा गिता राई
© खेलपाटी मिडिया प्रा.लि. - 2019 Web Design by : SoftNEP